सेयर अनलाइन कारोबार छिट्टै सुरु हुन्छ – Rajdhani Daily
सेयर अनलाइन कारोबार छिट्टै सुरु हुन्छ
२०४४ मा दुर्गम बैतडीबाट राजधानी प्रवेश गरेका चन्द्रसिंह साउदले लामो समय बिमा क्षेत्रमा खर्चेका छन् । सुरुमा उनले अध्यापन पेसा रोजे पनि समयले उनलाई फरक क्षेत्रमा पु¥यायो । सात वर्ष निजी विद्यालयमा पढाएका उनी नेपाल कर्मस क्याम्पसबाट स्नातकोत्तर पास गरी २०५१ मा नेपाल इन्स्योरेन्समा छैठौं तहमा प्रवेश गरेका थिए । बिमा क्षेत्रमै महाप्रबन्धक हुँदै प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसम्म बने । साउद चार्टर्ड क्यापिटल एन्ड इन्भेस्टमेन्टका अध्यक्ष पनि हुन् । हालै उनी चारवर्षे कार्यकालका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त भएका छन् । उनी नेप्सेमा आएपछि गरिने मुख्य काम, पुँजी बजारलाई व्यवस्थित गर्न नेप्सेको भूमिका, अनलाइन सेयर कारोबार, गैरआवासीय नेपालीहरूको लगानी सेयर बजारमा भिœयाउनेलगायतका विविध विषयमा साउदसँग राजधानीका लागि कमला अर्यालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
बिमा क्षेत्रबाट पुँजी बजारमा आउनुभएको छ । फरक क्षेत्रमा आउँदा कस्तो अनुभव गर्नुभएको छ ?
मलाई फरक क्षेत्रमा आएको जस्तो लाग्दैन । बिमा क्षेत्र पनि पुँजी बजारअन्तर्गतकै हो । फरक यति मात्रै हो कि म बिमामा हुँदा त्यहाँ बिमाका विषय मात्र हुन्थे भने यहाँ बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी, होटल, हाइड्रोलगायतका अन्य कम्पनी छन् । जहाँ दायरा फराकिलो भएको छ । म्यानेजमेन्टमा आइसकेपछि काम आफूले गर्नुभन्दा पनि काम गराउने हो । काम गराउने सन्दर्भमा बिमामा र यहाँ खासै फरक देख्दिनँ, उस्तै लाग्छ ।
नेप्सेमा आइसकेपछि प्राथमिकतामा कस्ता काम परेका छन् ?
अहिले सबैभन्दा जल्दोबल्दो कामका रूपमा रहेको काम हो, सेयरको अनलाइन कारोबार । त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो सुरु गर्ने काम हाम्रो प्राथमिकतामा परेको हो । यसलाई जतिसम्दो छिटो प्रयोगमा ल्याउन सके सबैभन्दा ठूलो काम हुन्थ्यो भन्ने मलाई लागेको छ । अनलाइन कारोबार सुरु हुन सक्यो भने लगानीकर्ताहरू पनि ढुक्क हुन्थे । दोस्रोमा हामीले प्राथमिकतामा राखेका काम नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीहरूको इन्डेक्स छुट्याउने काम हो । केही समयअघि मात्रै हामीले विकास बैंक समूहबाट लघुवित्त कम्पनीलाई छुट्याएका छौं । त्यसैगरी, नेप्सेको सूचीमा सूचीकृत कम्पनीहरूलाई अलगअलग सूची बनाउने काम तीव्र रूपमा अघि बढाएका छौं । त्यस्तै, सेयरको कारोबारसँग सम्बन्धित ऐननियमहरू पुराना र फरक खालका छन् । त्यसलाई परिमार्जन तथा संशोधन गर्दै लैजाने सोच बनाएको छु । हाम्रो कारोबार एक ढंगले भइरहेका छन् भने ऐननियमहरू फरक ढंगका पनि छन् । त्यसैले यस्ता फरक ढंगका तथा पुराना ऐनकानुनले सेयर कारोबारमा असर पर्ने, लगानीकर्ताहरूलाई पनि समस्या पार्ने भएकाले यसलाई परिमार्जन तथा संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यसैले संशोधन गर्ने कामलाई पनि हामीले तीव्रतासाथ अघि बढाउने हामीले सोचिरहेका छौं । त्यसैगरी, अर्काे पुँजी बजारसँग सम्बन्धित सूचनाहरू पारदर्शीका साथ हामीले लगानीकर्तालाई उपलब्ध गराउने कोसिस गर्नेछौं । र नेप्सेमा जेजति कम्पनीहरू सूचीकृत भएका छन्, ती कम्पनी आन्तरिक सुशासन राम्रो बनाउन आग्रह गर्ने र त्यस्ता कम्पनीलाई समयमै साधारण सभा गर्न घचघचाउने जस्ता काम गर्न हामी पहल गर्छांै । त्यस्तै नेप्सेभित्रका कर्मचारीहरूलाई पनि उचित व्यवस्थापन गर्ने काम पनि अघि बढाउँछौं र पुँजी बजारसँग सम्बन्धित जनचेतनाहरू व्यापक रूपमा फैलाउने काम गर्छांै । यो नियमित प्रक्रिया पनि हो र यसलाई हामीले काठमाडौं उपत्यका मात्रै होइन, उपत्यकाबाहिर कम्तीमा पनि सात वटा संघीय राज्यमा हामीले जनचेतनाका कार्यक्रमहरू गर्ने योजना छ । त्यससँगसँगै पुँजी बजारको दायरा फराकिलो बनाउन हामीले यहाँ भएका जति पनि पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरू छन् । ती कम्पनीलाई नेप्सेमा सूचीकृत गराउने प्रयास रहन्छ । त्यसका लागि हामी नेपाल सरकार, नियमन निकाय, सम्बन्धित कम्पनीहरूसँग पनि छलफलमा जाने सोच बनाएका छौं । नागरिक लगानी कोषसँग हामीले दुई चरणमा गरिसकेका छौं । सञ्चय कोषमा कार्यकारी प्रमुखको पद खाली भएकाले पद पूर्ति भएपछि त्यहाँ पनि हामीले काम सुरु गर्र्छाैं । त्योसँगै अहिले मार्जिन लेन्डिङको निर्देशन आएको छ, धितोपत्र बोर्डबाट । त्यसलाई पनि कार्यविधि बनाएर तुरुन्त लागू गर्नेछौं । त्यसका लागि स्टक ब्रोकरका साथी र लगानीकर्ता सबैसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने योजना बनाएका छौं । त्यसका साथै गैरआवासीय नेपालीको लगानीलाई पनि पुँजी बजारमा भिœयाउने भइरहेको छ । त्यो हाम्रो मात्रै अधिकारको कुरा होइन । राष्ट्र बैंक, नेपाल सरकार र सम्बन्धित नियमन निकायसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने योजना बनाएका छौं । यसलाई जतिसक्दो चाँडो नेपाली पुँजी बजारमा गैरआवासीय नेपालीको लगानी भिœयाउन पहल हुनेछ ।
मार्जिन लेन्डिङ कहिलेबाट सुरु होला त ?
धितोपत्र बोर्डको आगामी बैठकले यस विषयमा निर्णय गरेपछि कार्यविधि टुंगो लाग्छ । त्यसपछि मात्रै सुरु हुन्छ । त्यसका लागि त्यति धेरै समय कुर्नुपर्दैन ।
सेयर बजारलाई कसरी देशव्यापी बनाउँदै हुनुहुन्छ ?
त्यसो भए बैंकले ब्रोकर लाइसेन्स पाउँदैनन् त ?
सेयर बजार घटबढ भइरहने प्रक्रिया भएकाले आत्तिनुपर्दैन
६ वटा जति काम हाम्रो प्राथमिकतामा छन्
एनआरएनएको लगानी भिœयाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ
नया“ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउनुपर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन
सेयर बजारमा कालो धन भित्रिन त्यति सजिलो छैन
बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने कि नदिने छलफलको विषय हो
सेयर बजारका केही ऐनकानुन संशोधन गर्नुपर्नेछ ।
सेयर कारोबारलाई देशव्यापी बनाउने काममा हामी लागिरहेका छौं
यसमा हाम्रो भन्नु केही छैन । नेपालमा पुँजी बजारको आकार बढ्यो भने आउन सक्ला । नेपालको पुँजी बजारमा दर्ता भएका कम्पनीको संख्या कति छ, त्यसको आकार कस्तो छ, नेप्सेले भोलि आवश्यक पर्ने सेवा सुविधा दिन सक्छ कि सक्दैन । यदि यी सबै कुरा पूरा हुन्छन् भने नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता त्यति छ जस्तो मलाई लाग्दैन । तर, कारोबार बढ्दै गयो भने अर्काे कुरा कानुनी रूपमा पनि अलिकति अड्चन हुन्छ कि जस्तो कहाँनेर लागेको छ भने नेप्से भनेको फ्रन्ट लाइनको रेगुलेटर हो । रगुलेटर दुईदुई वटा हुँदा काम गर्न अकिकति अप्ठ्यारो हुने हो कि ? अर्काे कुरा यी निकाय सरकारी हुन् । प्राइभेट सेक्टरलाई दिँदा पुँजी बजारमा केही तलमाथि हुने हो कि ? अहिले एनआरएललाई भिœयाउने कुरा छ, अरू विदेशी लगानी पनि भिœयाउने कुरा छ । त्यसका लागि छुट्टै स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने भए ठीकै हो । अहिले भारतमा पनि गैरआवासीय भारतीयलाई मात्र लगानी गराउन छुट्टै निकाय छ । नेपालमा पनि त्यस्तै गर्न सके राम्रो हुन्छ । जिम्मेवारी भनेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई कसरी बलियो बनाउने हो । म त्यसैमा केन्द्रित छु । अरू स्टक एक्सचेन्ज थपिए भने पनि प्रतिस्पर्धामा अघि बढ्न सकिने गरी काम गर्नु मेरो दायित्व हो ।
समयमा वित्तीय विवरण निष्कासन तथा साधारण सभा नगर्ने कति कम्पनी होलान् ?
अहिले हामीले कुनकुन कम्पनीले त्यस्तो गरिरहेका छन् भनेर सूक्ष्म निगरानी गरिरहेका छौं । समयमा वित्तीय विवरण निष्कासन तथा साधारण सभा नगर्ने कम्पनीलाई समयमा विवरण सार्वजनिक गर्न र साधारण सभा गर्न दबाब दिने काम नेप्सेले गर्छ । नेप्सेको चेतावनीलाई बेवास्ता गर्ने कम्पनीको सूचीकरण खारेज गर्ने प्रक्रियामा जान्छौं । लगानीकर्ताको सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि हामी यस्ता कम्पनीमाथि कडा निगरानी गर्छाैं ।